Moments Neshamwari 47
Munhu ane microcosm ye macrocosm, iyo yose mune zviduku here? Kana zvakadaro, mapuraneti uye nyeredzi dzinooneka dzinofanira kusimidzwa mukati maro. Vari kupi?
Vafungi munguva dzakasiyana uye nenzira dzakasiyana siyana, vakati zvakasikwa zvinoiswa mumunhu. Semadimikira kana kutaura zvazviri, izvi zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Izvi hazvireve kuti zvakasikwa zvine zvigunwe nezvigunwe uye zvakapfeka maziso uye vhudzi mumusoro, kana kuti zvakasikwa zvakavakirwa zvinoenderana neazvino matanho emuviri wemunhu mumuviri, asi zvinoreva kuti mashandiro epadenga anogona kuve anoratidzwa uye kuratidzwa mumurume nenhengo uye nhengo. Mitezo iri mumuviri wemunhu haina kugadzirwa kuti izadze nzvimbo, asi kuti iite mamwe mabasa muhupfumi hwese uye hutano hwepamoyo hwese. Zvimwe chete izvi zvinogona kutaurwa nezvemiviri iri mudenga.
Iwo inopenya mheni dzekuvhenekera uye dzakatsiga kupenya orbs kumatenga midhiya kuburikidza nemauto zvakasikwa zvinoshanda mumuviri wenzvimbo, maererano nemutemo wepasi rese uye neruzhinji rwevanhu nekusimba kwehupfumi. Nhengo dzemukati, dzakadai seya nhengo dzebonde, itsvo, tsinga, pancreas, chiropa, moyo nemapapu, zvinonzi zvinoenderana uye zvine hukama zvakananga kumapuraneti manomwe. Vakadaro masayendisiti uye zvakavanzika saBoehme, Paracelsus, Von Helmont, Swedenborg, vazivi vemoto uye masayemistem, vakatumidza nhengo nemapuraneti anoenderana. Ivo havapi zvese zvakafanana zvinyorwa, asi bvuma kuti pane chekudzokorora chiito uye hukama pakati pemitezo nemapuraneti. Mushure mekuziva kuti kune chekunyorerana, mudzidzi anofanira, kana achida kuziva, afunge uye agadzirise nhengo dzipi dzinoenderana nemamwe mapuraneti, uye kuti dzakabatana sei uye dzinoshanda sei. Haakwanise kuvimba nematafura emumwe pachinhu ichi. Tafura yezvinyorwa inogona kunge yakagadzirirwa iye akaigadzira; zvinogona kunge zvisiri zvechokwadi kune imwe. Mudzidzi anofanira kuwana zvinyorwa zvake.
Pasina kufunga, hapana munhu angazomboziva kuti zvinhu zvakasikwa zvinoenderana uye zvakabatana sei nenhengo dzemuviri, kunyangwe zvingave zvinotaurwa nevamwe nezvazvo. Kufunga kunofanira kuenderera mberi kusvikira nyaya yazivikanwa. Izvo zvinoenderana nemapoka enyeredzi, nyeredzi masumbu, nebulae muchadenga, anoita mumuviri wemunhu sekunyengerera, nerve ganglia, nerve kuyambuka. Aya masumbu kana kuyambuka mumuviri kunobatidza mwenje, nerve aura. Izvi kumatenga zvinotaurwa sechiedza chenyeredzi, uye nemamwe mazita. Izvi zvaiita sezvisingaiti uye zvaisanzwisisika kune wemuchadenga, asi kana aifunga mumuviri wake kusvika azowana chimiro chemasvikiro emitsipa nemafungu avo, anochinja dzidziso yake nezvekuongorora nyeredzi yake. Aizoziva zvakaita nyeredzi kumatenga, uye nekugona kuzviwana munzvimbo dzomuviri wake.
Chii chinorehwa neutano huzhinji? Kana iri kuenzana kwemunhu wemuviri, wepfungwa newemweya, zvino chikamu chinoshandiswa sei?
Hutano kuzara uye mutsindo wemuviri muchimiro chayo uye basa. Hutano hwakawandisa kushanda kwemuviri mune basa raanoitirwa, pasina kukanganisa basa rawo kana kukanganisa kwemidziyo yaro. Simba rinogadzirwa uye rinochengetwa semhedzisiro yehutano. Simba haisi chinhu kunze kwehutano, kana yakazvimirira yehutano. Hutano hunochengeterwa nekuchengetedza iyo simba kana simba rakagadziridzwa, uye nekudzosera chiito pakati pezvikamu zvemuviri nemuviri zvakazara. Izvi zvinoshanda kune pfungwa uye yemweya chimiro chemunhu, zvakabatana nemuviri wake wemunhu, pamwewo neyakajairika mhuka yemurume. Kune hutano hwepfungwa uye pamweya sezvo paine hutano hwemuviri. Hutano hwese hwese hunochengeterwa apo chikamu chimwe nechimwe chemusanganiswa chinoita basa raro zvakanangana uye nekunaka kwechose. Mutemo unonzwisisika zviri nyore asi zvakaoma kutevedzera. Hutano hunowanikwa uye hunochengeterwa padanho rekuti munhu anoita izvo zvaanoziva zvakanyanya kuti awane hutano, uye anoita izvo zvaanoziva chaizvo kuti azvichengetedze.